Kuwait oo Kenya siinaysa dayn lagu dhisayo dugsiyo - Sabahionline.com
Kenya ayaa la saxiixatay Kuwait heshiis lagu siinayo dayn qaddarkeedu yahay 1.4 bilyan oo shilin oo u dhiganta 16.4 milyan oo dollar, si loogu dhiso dugsiyo iyo kaabayaal waxbarasho oo laga hirgalinayo Nyamira iyo Borabu, sidaana waxa Isniintii (16-kii Juuaaly) sheegay Capital FM-ta Kenya.
Kulankii IGAD ee Soomaaliya oo dib loo dhigay
Amirka Kuwait Sheekh Sabah Al-Axmed al-Jabir al-Sabah iyo Madaxweynaha Kenya Mwai Kibaki ayaa ku kulmay furitaanka shir-madaxeedka Midowga Afrika ee Addis Ababa, si ay u saxiixaan heshiiska. Lacagta ayaa waxa la soo marsiin doonaa Santuukha Kuwait ee Horumarinta Dhaqaalaha Carabta (KFAED).
Mashaariicda kale ee uu maal-galinayo KFAED ayaa waxaa ka mida daraasad lagu sameeynayo Mashruuca Waraabka Bura, dhismaha Isbtiaalka cusub ee Degmada Wajeer iyo dayn loogu tala-galay in lagu dhiso waddada Nuno-Modagshe, sidaana waxa sheegay Capital FM-ta Kenya.
Kulanka, ayuu Kbaki waxa uu dhiiri-galiyay in la sameeyo maal-gashi dheeraad ah. "Waxan ku casumayaa maal-gashadayaasha reer Kuwait in ay indha-indheeyaan oo ay ka faa'idaystaan fursadaha maal-gashi ee ka jira dalkeena," ayuu yiri.
Sheekh al-Sabah ayaa ammaanay dadaalka millatari ee Kenya ka waddo Soomaaliya. "Howl-galka ay Ciidamada Difaaca Kenya ka wadaan Soomaaliya ee ay la kaashanayaan ciidamada Dawladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya, waxa uu dhaliyay awooddii asaasiga ahayd ee sababatay in la xoreeyo meelo badan oo ka mida dalkan uu dilooday dagaalku," ayuu yiri.